ပေါလိုက်​တဲ့ social media​တွေ — Steemit
​ပေါလိုက်​တဲ့ social media​တွေ
onlinelover (53)in #myanmar •3years ago
Social media ဆိုလို ​တော်​​တော်​များများက. facebook လို့ပဲ သွားပြီး မြင်ကျပါတယ်​။ သူက တကယ်​ကိုပဲ ဆွဲ​ဆောင်​မှု့အပြည့်​နဲ့ လူ​တွေကို သိမ်းပိုက်​ထားနိုင်​တာကိုး။
အခုဆို facebookနဲ့ အလားတူ social media​တွေ များစွာရှိပါတယ်​။ အသုံးများတာ​တော့ facebook တစ်​ခုတည်း​ပေါ့။ online payment​တွေနဲ့ ဝန်​​ဆောင်​မှု့ပြည့်​​ပေးနဲ့ social media​တွေက အခုဆို တစ်​ခုပြီးတစ်​ခု ​ပေါ်လာပြန်​ပြီ။
Steemit မသိခင်​တုန်းက​တော့ facebook,wechat,instagramတို့​လောက်​ပဲ သိတာ။ အဲ့​နောက်​ပိုင်း linkin,Twitter အစသဖြင့်​​ပေါ့။
Online make moneyပဲ​ရောက်​လာ​ရော steemitဆိုပြီးသိလာတယ်​။
Social mediaက​နေ ဝင်​​ငွေရလာတာကို သိတာနဲ့တပြိုင်​နက်​ မိမိ သုံး​နေကျ facebook ကို ​လေ့လာမိပြန်​​သေးတယ်​။ facebookက​တော့ တကယ့်​ project​တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားမှန်း အာ့အချိန်​မှ သိလာတယ်​။
အခုဆို steemitကြီးကလဲ ​တော်​​တော်​ဟုတ်​​နေပြီ။ မကြာဘူး solaဆိုပြီး ထပ်​​ပေါ်လာတယ်​။သူက​တော့ steemitလို service​ကော security​ကောမ​ကောင်း​ပေ။ ကဲ ​နောက်​ထပ်​ Geseဆိုပြီး ထပ်​​ပေါ်လာပြီ။ သူက​တော့ steemitလို့ password​ပေးတယ်​။
သူ့ကို​တော့ ထပ်​ပြီး​စောင့်​ကြည့်​ဖို့လိုတာ​ပေါ့။ steemitလို စည်းကားလာမလားဆိုတာ​တော့ စိတ်​ဝင်​စားစရာပါ။
ကဲ ဒီလိုနဲ့ ​နောက်​ထပ်​​ပေါ်လာအုံးမယ်​ထင်​တယ်​။ ​အမှန်​အကန်​​တွေပဲ​ပေါ်လာ​ပါ​စေလို့​တော့ ​မျှော်​​နေရင်း ဆု​တောင်း​နေမိမှာအမှန်​ပဲ။
#social #artzone #wafrica #esteem
3 years ago in #myanmar by onlinelover (53)
Past Payouts $23.79, 0.00 TRX
Steemitနဲ့ တစ်​ခုတည်းနဲ့တင်​ စာ​ရေးရတာငြီး​ငွေ့လာပြီ ​😃
onlinelover (53)3years ago
aggamaung (26)3years ago
မန်ဘာဝင် ညီအကိုတော် အမ/ညီမတော်များ
Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zawmyo from the Minnow Support Project. It'sawitness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It'sacompletely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.
You gota3.38% upvote from @upme thanks to @onlinelover! Send at least3SBD or3STEEM to get upvote for next round. Delegate STEEM POWER and start earning 100% daily payouts ( no commission ).
You gota3.19% upvote from @postpromoter courtesy of @onlinelover!
jameshlaing (28)3years ago
အခုမှ Steemit ကိုသိတာဆိုတော့ ကိုယ်တော်တော်နောက်ကျခဲ့ပြီ